ओलीले बोलाउँलान् सचिवालय बैठक? - Onlines Time
ओलीले बोलाउँलान् सचिवालय बैठक?
शनिबार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहित ५ सचिवालय सदस्यले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लिखित आग्रह गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले भने तत्काल सचिवालय बैठक नबोलाउने अडान लिँदै आएका छन्।
पार्टीभित्र देखिएको विवादका विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन बहुमत सचिवालय सदस्यले माग गरेका हुन्। उनीहरुले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा परामर्श गरेर आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाउने बताएको नेताको दाबी छ।
ओलीले पार्टीमा परामर्श गरेर बैठक बोलाउने बताएपछि लगत्तै प्रचण्डले प्रतिवाद गर्दै पार्टी अध्यक्ष यहीँ भएको बताउँदै अझै कोसँग परामर्श गर्न खोजेका भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। उनले महासचिव विष्णु पौडेलसँग परामर्श गरेर छिट्टै सचिवालय बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ। आफूविरुद्ध खुमलटार र धुम्बाराहीमा गुटको भेला गरेको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्य ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउँछन् कि भनेर अझसम्म पनि पर्खेका छन्। तर, ओलीले बहुमत सचिवालय सदस्यको निर्णयलाई मानेर बैठक बोलाउने सम्भावना न्यून देखिएको बताइएको छ।
‘हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बैठक बोलाउन लिखित रुपमै माग गरिसकेका छौँ। उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले परामर्श गरेर बालाउँछु भन्नु भएको छ,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल बैठक बोलाउने तयारी गर्नु भएको छैन। सायद बैठक बोलाउनुहुन्न होला।’ यदि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक बोलाउन नमाने छलफल गरेर अघि बढिने ती सचिवालय सदस्यको चेतावनी छ।
तर, ओलीले आफ्नो पक्षका नेतालाई राखेर गुटका भेला निरन्तर गर्दै आएका छन्। गत बुधबार ओलीसहित ईश्वर पोखरेलले प्रदेशका एकका आफू निकट नेतासँग भेला गरेका थिए। ओलीले प्रदेशका एक आफू निकट नेतासँग भर्चुअल रूपमा बालुवाटारबाट सम्बोधन गरेका थिए।
शनिबार ओली गुटका नेतालाई राखेर ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ बसुन्धाराको एक होटलमा भेलाको आयोजना गरी सम्बोधन गरेका थिए। तर पार्टी बैठक बोलाउन भने ओली आनाकानी गर्दै आएका छन्। पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमा भएकाले ओली निरन्तर बैठक बस्न अनिच्छा देखाइरहेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २० गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘वान टू वान’ संवाद गरेका थिए। त्यसभन्दा अघि पार्टी विवादका विषयमा दुई अध्यक्षबीच दर्जनौँ पटक संवाद गरेपनि टुगोमा पुग्न सकेका थिएनन्। त्यसपछि प्रचण्डले आफूसहित बहुमत सचिवालय सदस्यलाई राखेर ओलीसँग छलफल गर्न थालेका छन्।
शनिबार प्रचण्ड बहुमत सचिवालय सदस्यसहित ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। पछिल्लो समय पार्टी विवादका विषयमा ओलीलाई प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यले भेट्ने गरेका छन्।
Prevहोन्डाले भित्रायो साढे ३४ लाख मूल्य पर्ने यो मोटरसाइकल, स्पिड प्रतिघन्ट
Nextप्रचण्डसहित ५ सचिवालय सदस्यद्वारा बैठक बाेलाउन लिखित आ’ग्रह, आएन ओलीकाे उत्तर